अहिले मधेसमा एमालेलाई सुध्रिने ठाउँ दिएका छौं
२०७४ भदौ २८ बुधबार १५:१९:००
स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी तापक्रम बढिरहँदा दवावमा छ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) । आन्दोलनलाई निष्कर्षमा नुपुर्याइ चुनावमा फर्किएको पार्टी भएकाले पनि उसलाई परिणाम आफ्नै पक्षमा पार्नुपर्ने प्रेसर छ । ६ मधेस केन्द्रित दल एकीकृत भएको बनेको पार्टी हुनाले लाभ पनि छ । र, चुनावको मुखैमा प्रभावशाली नेताहरूको बर्हिगमनले ऊ सामू चुनौती पनि छ । दुई नम्बर प्रदेशमा पहिलो शक्ति बन्ने लक्ष्यका साथ उसले उमेदवारहरूलाई मैदानमा खडा गरेको छ ।
चुनावी प्रचार–प्रसारको चटारोमा रहेका राजपाका महासचिव मनिषकुमार सुमनसँग हाम्रो भेट सप्तरीको राजविराजमा भएको थियो । बाह्रखरीकर्मी अक्षर काका र अशोक पौडेलले सुमनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन बहिस्कार गरेको यहाँको पार्टी पनि तेस्रो चरणमा दुई नम्बर प्रदेशमा सहभागी भएको छ । कत्तिको छ चुनावी दौडधुप ?
निर्वाचन आउन केही दिन मात्रै बाँकी भएकाले एकदम दौडधुप छ । हाम्रा सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरु स्थानीय निर्वाचनमा परिचालित भएका छन् । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य लगायत प्रत्येक नेताहरु निर्वाचनमा छन् ।
संविधान जारी भएदेखि नै संशोधनको माग गर्दै यहाँहरु संघर्षमा हुनुहुन्थ्यो । संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल भएपछि निर्वाचनमा आउनुभयो ? कसरी यो परिस्थिति सृजना भयो ?
हामीले पहिले देखि नै भन्दै आएका थियौं । यो निर्वाचन केबल निर्वाचन मात्रै होइन । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पनि हो । तसर्थ केही विषय संशोधन गर र त्यसमा हाम्रो पनि आत्मियता छ भन्ने अडान थियो । त्यहि कारणले पहिलो चरण र दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई सशक्त रुपमा बहिस्कार गर्यौं । तर, तेस्रो चरणको निर्वाचन भन्दा पहिले संविधान संशोधन मतदानमा लगेर टुंग्याइएकाले हामी निर्वाचनमा आएका हौं ।
अर्को कुरा २० वर्षसम्म स्थानीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई समाप्त पार्न, बेथितिलाई हटाउन, लोकतन्त्रमा आफ्ना मागहरु स्थापित गर्न सबैभन्दा ठूलो अहिंसात्मक बाटोका रुपमा निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न खोजेका छौं । तसर्थ तेस्रो चरणको निर्वाचन पर्सादेखि सप्तरीसम्म हुन गइरहेको छ । हामी त्यसमा सहभागी छौं ।
संविधान संशोधनको विषयमा कुरा गर्दा यसअघि हामी असन्तुष्ट हुँदाहुँदै ९० प्रतिशत सांसदले जारी गर्नुभएको थियो । तर, अहिले ६२ प्रतिशतले संविधानका यी विषय संशोधन हुन जरुरी छ भन्दै मत व्यक्त गरेका छन् । यसले संविधान अपुरो र अधुरो छ भन्ने प्रमाणित हँदा हामी खुसी छौं ।
संविधान संशोधनको अपरिहार्यता प्रमाणित भएको यहाँले बताउनुभयो । यो सँगै तपाईँहरुले भन्दै आएको मधेस ८ जिल्लामा सीमित भएको कुरालाई त मान्नुहुन्छ नि ?
संघीयताको यो सिमांकनलाई हामीले मानेका छैनौं । संघीयताको यो सिमांकन अवैज्ञानिक र अपुरो छ । यसले न यसले जनघनत्वलाई देखेको छ, न आर्थिक सम्भाव्यतालाई देखेको छ । न त सघन बसोबास वा भाषिक विशेषतालाई देखेको छ । अहिले उहाँहरुले बनाइदिएको प्रदेश नं २ आर्थिक रुपले यस्तो गरिब छ ।
जहाँसम्म मधेसको कुरा छ । मधेस भनेको निर्वाचन हुने इकाइले तोकिने होइन । त्यो त समान बसोबास, समान भाषिक बसोबास, सांकृतिक जनघनत्वले निर्धारण हुने हो । मधेस भनेको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र उत्तर चुरेदेखि दक्षिणमा भारतको सिमासम्म हो । निर्वाचन आयोगले गराउने इकाइलाई मात्रै मधेस भनिँदैन ।
मंसिर १० मा पहिलो चरण र २१ मा दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अहिलेकै सिमांकन अनुसार नै हुँदैछ । सोही अनुसार यहाँहरु पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ होइन ?
नेपालको राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ । अब हुने निर्वाचन अगाडि सिमांकन हेरफेर हुँदैन । त्यो हामीलाई पनि राम्ररी थाहा छ । तर, अहिले फेल भएको संविधान संशोधन कांग्रेस र माओवादीको ‘कन्जिुसी’ मानसिकताबाट आएको थियो । यो पनि नगरौं, त्यो पनि नगरौं भन्दै अत्यन्तै ‘कन्जुसी’ मानसिकताका साथ अधुरो र अपुरो संशोधन विधेयक आएको थियो । त्यो संशोधन विधेयक पराजित र परास्त भइसक्यो । अब हुने निर्वाचनको जनमतले यो भन्दा राम्रो संशोधन विधेयक ल्याउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।
निर्वाचनमा होमिनुभएको छ, २ नम्बर प्रदेश नै यहाँहरुको मुख्य आधार भूमि भन्नुहुन्छ । कति सिट जित्ने आँकलन छ ?
यति सिट भनेर हामी दाबी गर्दैनौं । हामी के कुरामा ढुक्क छौं भने मधेसको प्यारो पार्टी भनेको राजपा नेपाल नै हो । हालै सम्पन्न मधेस आन्दोलन हाँकेको र नेतृत्व गरेको पार्टी भएका नाताले मधेसको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुन्छौं भन्ने कुरामा ढुक्क छौं ।
६ पार्टी एकीकरण गरेर एउटा सकारात्मक सन्देश त दिनुभएको छ । तर, एउटै मुद्दामा आन्दोलन गरेका अन्य केही दल छुट्टै चुनावी मैदानमा छन् । यसो हुँदा तपाईँले भनेजस्तो परिणाम आउन गाह्रो होला कि ?
मधेसवादी दल जसको मधेसमा मात्रै संगठन थियो ति पार्टीहरु एक ठाउँ भएका छौं । हो, मधेसी कहलाउँदा दलमध्ये उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम र विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम छुटेका छन् । उहाँहरु अहिले भर्खर मधेस आउनुभएको छ । हिजो संविधान संशोधनका विषयलाई लत्याएर रुकुम, रोल्पा, प्युठान तिर घुम्न जानुभएको थियो । हामीले उपेन्द्र यादवलाई त एकीकरणको समयमा चिठी पठाएकै हो ।
तर, उहाँ बाबुराम भट्टराई र अशोक राईको काँधमा चढ्न बढी व्यस्त भएकाले एकीकरणसम्म आउनुभएन । हामी अझै पनि राजपासँग एकीकृत हुनुस्, ६ वटा पार्टी एक भइसक्यो, संयुक्त आन्दोलन गर्ने मध्ये तपाईँ मात्रै छुटेको हो आउनुस् भनेर आग्रह गरेका छौं । अर्को निर्वाचन भन्दा पहिले आउनुहुन्छ कि सुध्रिनुहुन्छ कि भन्ने आशा छ ।
राजपाका केही नेताहरु टिकटबारे असन्तुष्ट भएर पार्टीबाट बाहिरिनुभयो । जस्तै, वीरगञ्जमा विमल श्रीवास्तव, जंग्गीलाल यादव लगायत । यस्तो हुँदा राजपामा पदलोभी छन् भन्ने सन्देश जाँदैन ?
त्यस्तो म्यासेज भन्दा पनि राजपा जनताबीच बढि लोकप्रिय र जनताका माझ बढी रहेको भान हुन्छ । पार्टी एकीकरण भएको ४ महिना भित्र निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यो पनि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छोटो अवधिमै तयारी गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले यस्तो देखिएको हो । साँच्चै भन्दा टिकट वितरण गर्दा राजपाका योग्य, कर्मठ, प्रतिभाशाली, अन्दोलनमा होमिएका नेताहरु उमेदवार हुनबाट छुट्नुभएको छ ।
तर, हामीले के भनेका छौं भने राजपा भोली आफ्नो सांगठनिक गतिविधि, सरकारी नियुक्ती अथवा उच्च पद र भोली हुने निर्वाचनमा प्रोत्साहन वा अवसर दिनेछौं भनेकै छौं । केही साथीहरु हाम्रो त्यो आग्रहलाई पर्खेर बस्न सक्नुभएन । स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि उहाँहरु पार्टी छोडेको भए अफ्ट्यारो हुन्थ्यो । तर, अगाडि नै पार्टी छोडेर जानुभएकाले गुन लगाउनु भएको छ । यद्यपी राजपाले आफ्नो कुनै त्यस्ता नेतालाई कारबाही गरेको छैन । पछि फर्केर आउने आशका साथ अहिलेलाई विदा गरेका छौं ।
नेकपा एमालेलाई अहिले मधेसमा आउन अफ्ठेरो भएको छ । त्यसको कारण राजपा पार्टी भन्ने छ नि ?
राजपा नेपाल बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास राख्दछ । दलीय संस्कार हामीले पनि मान्नुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दललाई निषेध गर्न हुँदैन । हामी पनि कुनै दल विशेषलाई निषेध गरेका छैनौं । एमालेका नेताले मधेसीलाई काले भनेर होच्याएकाले, नेकपा एमालेका नेताले लटरम्म फलेको आँपबाट झरेको भनेकाले, एमाले नेताले हाम्रा बाउ बाजेले लगाउने पोषाकलाई होच्याउने गरेकाले मधेसका जनताले बहिस्कार गरेका हुन् ।
त्यो बहिस्कार गरिरहेका जनताको नेतृत्व कहीँ–कहीँ राष्ट्रिय जनता पार्टीका कार्यकर्ताले गरेकै हुन् । तसर्थ एमालेलाई सुध्रिन आग्रह गरेका छौं । लोभले पनि सुध्रिनुस् भन्ने आश गरेका छौं । सुध्रिनु भएन भने निर्वाचनमार्फत जनताले देखाइ दिनेछन् ।
अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले राजपालाई हामीले चुनावमा लिएर आयौं । हुलाकी राजमार्ग लगायत मधेसको विकास कांग्रेसले नै गरेको हो भनिरहेका छन् । कांग्रेसलाई नभई यहाँको पार्टीलाई चुन्नुपर्ने कारण के ?
सात खर्ब भन्दा ठूलो राशी प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप कोषमा जम्मा हुँदा खर्च गर्न कन्जुस्याईँ गर्ने कांग्रेसले हुलाकी राजमार्ग जस्तो परियोजना ल्याइदिएँ भन्ने कुरा मिथ्या हुन् । हुलाकी राजमार्ग मधेसी जनताको दबाबले आएको हो । राजपाले नै हुलाकी राजमार्ग बनाउँछ ।
कांग्रेस बहुदल आएपछि २० वर्ष सरकारमा बस्यो । तर, मधेसका लागि केही गर्न सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग बन्ने बेला संयोगले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले मैले गरेको हुँ भनेर ढिपी कस्छन् । त्यस्तो ढिपी नगर्न म आग्रह गर्छु ।
जहाँसम्म राजपालाई चुनावमा ल्याएको भन्ने कुरा छ । हामीलाई उहाँहरुले चुनावमा ल्याउनुभएको होइन । राजपाका कार्यकर्ताको चुनावमा जाने इच्छा, आम सर्वसाधरणको दबाबका कारण हामी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका हौं ।
हाम्रो संविधान संशोधनको माग छिनोफानो पश्चात निर्वाचनमा आएका छौं । कसैले ल्याइदिएको होइन । जनतामा काम गर्ने पार्टी हो । जनादेश अनुसार निर्वाचनमा आएका हौं ।
अन्तिममा मतदातालाई पार्टीको तर्फबाट के अपिल गर्नुहुन्छ ?
हामीले मतदातााई घोषणापत्र मार्फत अपिल गरेका छौं । राजपा सत्ताको लागि होइन, संघर्षका लागि जन्मिएको पार्टीको हो । राजपाले जितेको स्थानीय तहमा स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार दिनेछ । मधेस विकासको मेरुदण्ड हुलाकी सडक निमार्णलाई विशेष जोड दिनेछ ।
मधेसलाई देश र दुनियाँलाई चिनाउने छ । मधेसका युवालाई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्नेछौंं । यो विभेदकारी संविधानको आवश्यक संशोधनका लागि हामीलाई प्रेरित गर्नेछ । आन्दोलनमा साहदत प्राप्त शहिदको सम्मान दिन र घाइते आन्दोलनकारीलाई मलम लगाइदिन पनि राजपालाई सबैले मतदान गर्छन् भन्ने आशा लिएका छौं ।